Common Fahalalana - Hangzhou DryAir fitsaboana Co., Ltd
Miverena-key Dry Room System
VOC fiafarana rafitra
NMP rafitra famerenana
Production Machine, Facility
Miasa Principles of Dryair Products
Fomba ny Dehumidification:
1. hihena dehumidification
Ny rivotra dia nampangatsiahina ho ambany ny ando teboka, ary avy eo ny rano Voafintina esorina.
Izany no fomba mahomby eo ambanin'ny toe-javatra izay ny ando teboka dia 8 ~ 10 ℃ na mihoatra.
2. famatrarana dehumidification
hamintinana ireo mba hampangatsiaka ny rivotra mando mba hampisaraka ny hamandoana.
Izany no fomba mahomby raha ny rivotra boky kely fa tsy sahaza ho an'ny toe-javatra lehibe boky rivotra.
3. Rano hisakana ny fiasan'ireny dehumidification
Lithium vahaolana dipoavatra klôro no ampiasaina mba mandray hamandoana.
Ny teboka ando azo nihena ho -20 ℃ na izany, fa ny fitaovana dia lehibe, ary ny hisakana ny fiasan'ireny ranon-javatra dia tsy maintsy ho soloina.
4.Wheel-karazana desiccant dehumidification
Ny tanimanga kofehy ny impregnated porous hygroscopic mpiasa no ampiasaina ho toy ny toho-tantely-mpihazakazaka mba hidiran'ny rivotra.
Ny rafitra dehumidification Tsotra, izay mety hahatratra -60 ℃ na latsaka amin'ny alalan'ny manokana mitambatra ando hevitra.
Izany no fomba nampiasain'i Jierui.
NMP mijoro for N-Methyl-2-Pyrrolidone
Koa satria manana NMP avo sy iva mangotraka etona tsindry ara-dalàna eo ambany mari-pana, dia mety ho mora foana Voafintina amin'ny hihena ambany mari-pana ara-dalàna. Araka ny rijan ny Antoine, amin'ny alalan'ny ny toetra, fampahiratana amin'ny NMP dia afaka atao amin'ny alalan'ny hihena (raha toa rano fanarenana vola mitombo fanamainana setroka mandatsa-dranomaso raha misy rano bebe kokoa).
Tombony ny VOC fitanana rotors:
1.High fampisehoana & fahombiazan'ny
Mampiasa High silica zeolites sy mampandeha carbons amin'ny adsorption goavana fahafahana mamela ny VOCconcentrator mba flexibly hitondra karazan-VOCs ary miasa eo ambanin'ny toe-javatra samy hafa ny asa.
2.Capability ny fitsaboana VOCs avo mangotraka
Carbon fitaovana manana olana mba hitondra ny VOCs avo mangotraka noho ny mari-pana desorption fetra. Mifanohitra amin'izany kosa, ny toetra mampiavaka ny zeolite rotors dia incombustible sy hafanana avo fanoherana, izay manome fahafahana ny VOC concentrator mampiasa ny adsorption avo rivotra mafana.
VOC polymerized mora foana ny hafanana angovo (ohatra styrene, cyclohexanone, sns) dia azo tsaboina tsara amin'ny alalan'ny High-Silica zeolite.
4.Cleanability & fampahavitrihana amin'ny alalan'ny hafanana fitsaboana manokana
Ny zeolite calcining rotors amin'ny alalan'ny dingana efa tonga zavatra rehetra inorganic anisan'izany ny adhesive. Clogging ao amin'ny Fanodina singa mety hitranga aorian'ny fe-potoana iray use.But, aza manahy !! Ny Fanodina dia washable araka ny tokony hanala voangony dust.It ny tsara kokoa mihitsy aza fa ny zeolite Fanodina azo hiverina hazoto amin'ny alalan'ny hafanana fitsaboana araka ny toe-javatra.
Mahazatra Applications ny VOC fitanana rotors:
Possible Facility / Product tsipika VOCs iharan'ny fanaraha-maso
Automotive / Parts mpanamboatra painting trano rantsankazo Toluene, Xylene, Esters, Alcohols
Steel fanaka mpanao Mandoko trano rantsankazo, lafaoro
Adhesive / andriamby scotch mpanamboatra Coating dingana, manadio singam Ketones, Mek, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, sns
simika Orinasa mpanadio solitany, Reactor Manitra hydrocarbons, Organic amine, Aldehydes, Alcohols
Synthetic resin / Glue Maker Plastika, gitara dingana orinasa mpamokatra entana Styrene, Aldehydes, Esters
Semi-mpitarika Cleaning vondrona Alcohols, Ketones, Amines
Mahasoa ando teboka fiovam-po table:
° Cdp g / kilao ° Fdp Gr / lb
-20 0,63 -4 4.4
-12 1,33 10.4 9.3
-8 1.9 17,6 13.3
-7 2.1 19,4 14.7
-1 3.5 30,2 24.5
2 4.3 35,6 30,1
6 5.8 42,8 40,6
7 6.2 44,6 43,4
8 6.6 46,4 46,2
11 8.1 Anarana 51,8 56,7
27 22.6 80,6 158,2
33 32.4 91,4 226,8
No. 2088 Keji Road Qingshan Industrial Park Linan / Hangzhou / Zhejiang Province Shina